पिसिआर रिपोर्टसँगै भाइरल लोडको समेत जानकारी दिइने – Kathmandutoday.com
काठमाण्डु टुडे २०७७ असोज १ गते ७:५५ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, १ असोज– सरकारले अन्ततः आरटी पिसिआर रिपोर्ट दिँदा भाइरल लोडको समेत जानकारी दिने भएको छ । हालसम्म यो विधिअन्तर्गत परीक्षण गरेपछि पोजेटिभ वा नेगेटिभ भनेर नतिजा दिइन्थ्यो, संक्रमितमा भाइरसको मात्रा कति छ भन्ने तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख गरिँदैनथ्याे । प्राविधिक रुपमा भाइरल लोडलाई साइकल थ्रेसहोल्ड (सिटी) ‘भ्यालु’ को रुपमा मापन गरिन्छ ।
‘अबदेखि आइटी पिसिआर परीक्षण नतिजा दिँदा सिटी भ्यालुसमेत उल्लेख गरेर दिन प्रयोगशालालाई सूचना गरेका छौं,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने । विज्ञका अनुसार कोरोना पोजेटिभमा भाइरल लोड बढी अथवा कम रहेको सूचना विभिन्न हिसाबले उपयोगी मानिन्छ ।
यो ‘भ्यालु’ ले संक्रमितमा भाइरसको उपस्थितिको मात्रा थाहा हुने भएकाले संक्रमणको अवस्था र उपचारका लागि आवश्यक क्लिनिकल निर्णय लिन सहयोग पुग्छ। यसले सबैभन्दा बढी संक्रामक ‘सुपर स्प्रेडर’ लाई पहिचान गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
नेपालका सबै प्रयोगशालाले आरटी पिसिआर परीक्षण गर्दा यो तथ्यांक स्वतः आउँछ । तर यसअघि यो सूचना सरकारी कार्यालय र प्रयोगशालाका ‘लग बुक र मेसिन’ मा मात्र सीमित थियो। बिरामीको उपचार र अनुसन्धानमा यसको खास उपयोग भएको थिएन । ‘सिटी भ्यालुको उल्लेख गर्दा आरटी पिसिआरको विश्वसनियता बढ्छ र यो धेरै हिसाबले उपयोगी छ,’ प्रवक्ता गौतमले नागरिकसँग भने।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामान्यतया ३५ अंकभन्दा माथि रहे कम भाइरल लोड र ३५ भन्दा जति कम हुँदै गयो त्यति नै बढी भाइरल लोड भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘स्ट्यान्डर्ड टेष्ट’ मानिएको आरटी पिसिआरले संक्रमितको पहिचान गरे पनि वास्तवमा ती संक्रमितले तुलनात्मक रुपमा फरकफरक हिसाबले भाइरसको प्रसारण गर्छन् भन्ने मानिँदै आएको छ । नागरिक दैनिकबाट
अन्ततः गले ओली, भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार
‘तीन करोड नेपालीमध्ये एक हजारलाई सोधेर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन’
पूर्वराजावादीलाई मदत गर्ने सरकारको तयारी
ओलीले प्रचण्डलाई हप्काउन खोजेपछि माधव, झलनाथ र वामदेव कड्किए
नौ लाख नेपालीलाई सुरुमै कोरोना खोप
२ करोड १७ लाख नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बल प्रयोग !
माधव नेपालले ओलीलाई भने–तपाईंमा म सुपर म्यान हुँ भन्ने घमण्ड छ